Yolulela marko nokususwa vaginal tightening imigca enqamlezeneyo rejuvenation umatshini fractional co2 icebo eliphethe umtha wokukhanya omninwaname cl-20-icebo eliphethe umtha wokukhanya omninwaname ubuhle umatshini-Hunan Astiland Zonyango Aesthetics Iteknoloji Co., Ltd.
Inkqubo ye-CO2 engalunganga yokuhlinzwa ye-laser isebenza ngokuhlulahlula umthi we-laser kuthotho lwamachaphaza amancinci kakhulu ajolise kudonga lwangaphakathi lobufazi. Kwinqanaba lokunxibelelana, ichaphaza laser lisusa indawo encinci yezicubu. Oku kudala inciniba microscopic ejikeleze isentimitha seenwele zomntu. Njengoko umzimba uzilungisa ngokwawo, ukhuthaza iiseli ukuba zenze izicubu ezitsha ezinempilo kwindawo ye ichaphaza kwaye zijikeleze kwangoko. I-laser ikwasebenza ukutshisa indawo phakathi kwamachaphaza, ukuvuselela umsebenzi weeseli ezikhethekileyo ezenza i-elastin kunye ne-collagen - icandelo elibalulekileyo lezicubu ezinempilo.
Inkqubo ye-CO2 engalunganga yokuhlinzwa ye-laser isebenza ngokuhlulahlula umthi we-laser kuthotho lwamachaphaza amancinci kakhulu ajolise kudonga lwangaphakathi lobufazi. Kwinqanaba lokunxibelelana, ichaphaza laser lisusa indawo encinci yezicubu. Oku kudala inciniba microscopic ejikeleze isentimitha seenwele zomntu. Njengoko umzimba uzilungisa ngokwawo, ukhuthaza iiseli ukuba zenze izicubu ezitsha ezinempilo kwindawo ye ichaphaza kwaye zijikeleze kwangoko. I-laser ikwasebenza ukutshisa indawo phakathi kwamachaphaza, ukuvuselela umsebenzi weeseli ezikhethekileyo ezenza i-elastin kunye ne-collagen - into ebaluleke kakhulu kwezicubu ezinempilo.
Ukuhamba kwegazi okuphuculweyo kunye nethoni yokuncipha kunciphisa iintlungu, kuphucula ukusebenza ngokwesondo kunye nokuchama kwaye kunokonyusa ukwaneliseka ngokwesondo.Unyango ngokwalo luyinto esemngciphekweni ophantsi, alunazintlungu, kwaye lufanelekile uninzi lwababhinqileyo. Iziphumo zeklinikhi zibonisa ukuba unyango olukhawulezayo nolula lwasekhaya lobufazi yinto esebenzayo, engathumekiyo kunye neziphumo ebezingalindelekanga ezimbi.
Inokubonelela ngeendlela zokuskena okunamandla kunye nokuskena okungahleliwe phantsi kwendlela yokusebenza. Inkqubo elawulwa nge-microprocessor kunye ne-scanical optical eyenziweyo yenza ukuba iziphumo ze-laser lattice, imilo kunye nobunzima zihlengahlengiswe ukwakha iindlela ezahlukeneyo, ezenza ukuba unyango lube lula kwaye lujolise ngakumbi. Itekhnoloji ekhethekileyo yokulawulwa kokukrekhwa elawulwa ngokungekho mthethweni iqinisekisa ukuba zonke iindawo zonyango zinexesha elaneleyo lokuphola, zithintele ukwenzakala kwesikhumba okubangelwa kukuqokelela kobushushu ngexesha lonyango, kwaye kuncipha ngomgangatho wempembelelo efanelekileyo ngelixa kusonyuswa isiphumo sonyango.
Imisebenzi yeLaser yeVaginal
Ukomelela kobusu lobufazi -Ukuqina okuqinileyo, ukunyanzela okungapheliyo, ukuqina ukuze uphucule ama-60%;
Ukucoca isondo lobufazi - Inqanaba lokulwa nokwaluphala, ubuncinci kwinqanaba lokuphucula i-80%;
Ubunqunu be-moist-Ukuphuculwa kwe-secretion, inqanaba lomswakama ukuphucula i-80%;
I-vagina epinki - Ukuvuselelwa kweVulva, ukukhanya kwamabala kunye namalungu ebala leepinki, isidanga esibuthathaka sokuphucula i-70%.
Imisebenzi yeLaser yezahluko
Ukuvuselelwa kwesikhumba kunye nokuphinda ubenamandla
Ukukhupha ukungcola, ukuqina kwesikhumba
Ukukhutshwa kwamabala kunye nokuqunjelwa, ukususwa kwe-melasma
Izibonda ezityibilikayo njengokutsha, utyando, umothuko, kunye namanqaku woluli, njl
Susa i-chloasmas engenakuchaphazela kunye ne-pigmentation
Ukuphazamiseka komonakalo welanga ngokuSebenza kwemisebenzi yeLaser
Ngokuyintloko ukusika, ukutshisa, i-carbonation, i-gasization, i-hemostasis, njl njlonyango.
1. I-USA ingenise ityhubhu ye-RF yentsimbi, icompact kunye nayo yonke intsimbi etywiniweyo, ukusebenza okuzinzileyo, amandla aphezulu, akukho ndleko zinokuselwa.
2. 3 kwenkqubo enye: I-laser yokuhlinzwa, i-laser yokwaleka, i-laser yelungu lobufazi.
3. Ingalo ezi-7 ezihlanganisiweyo Inkqubo yokuhanjiswa kwe-laser yenza umsebenzi oguqukayo kunye neendleko zamandla amancinci.
4. I-8.4 intshi yinyani yombala we-LCD, ulawulo lomntu lwesoftware.
5. Iindlela ezi-3 zokukhetha ukuphuma kwe-laser: ukushukuma, ukulandelelana kokuskena kunye nokuskena kwe-discrete kuzo zonke iimfuno zotyando.
6. Ukuskena iilensi zebala ukulungelwa kokulinganisa okungcono kwiflethi. Isithuba se-0.1mm.
7. Iigrafiki ezininzi kunye nemodi yokuskena, iigraphic zinokuhlenga-hlengiswa ngeendlela ezimbini.
8. Sebenzisa ukubonakala ejolise kwilitye ukujolisa ngqo kwindawo yonyango.
9. Inhale kunye nenkqubo yomoya ingakhiwa ngaphakathi.
I-RF-CO2 laser (10.6µm)
1-40W (Idiphu enye)
1-120W (Isiporho esikhulu)
I-635nm diode laser ≤5mw
8.4 ”isikrini sokuchukumisa umbala
Ukuskena okukhanyisiweyo okukhanyisiweyo
Isangqa, isikwere, isangqa, i-oval (esemgangathweni), unxantathu, hexagonal kunye nomgca othe ngqo
Iskena sokujonga ubude
F = 50mm (FFLS) okanye F = 100mm (HFLS)
I-75000W / cm2
I-angle yokukhupha iibhule
I-rad ye-0.4 m
I-5mj-100mj / inqaku
Amandla ewonke yokutsala
Ububanzi bendawo ekugxilwe kuyo
≤0.1mm(II-FFLS) U, ≤0.2mm (HFLS)
Ubungakanani be-FFLS scan
I-15 * 15mm max
Ubungakanani be-HFLS scan
I-20 * 20mm max
Iingalo ezisi-7 ezidityanisiweyo
Inhale kunye nenkqubo yomoya
20℃-60℃ Ubuntu bezizalwane ≦90%